Yona yonyaka wokhetho lonyulo e-United States kwaye isihloko siyaziwa kakhulu kwiiklasi kwilizwe. Ukuxoxa ngonyulo lukazwelonke kungabandakanya uluhlu olubanzi lwezihloko ngaphaya kwabaviwa ababini kuphela. Umzekelo, unokuxoxa kwaye uchaze iikholeji yokhetho lwase-US kunye nenkqubo yokuqokelela nokubala iivoti. Iiklasi zezinga eliphezulu ziza kufumana isihloko ngokukhawuleza njengoko ziyakwazi ukuzisa kunye nokuqhathaniswa kwiinkqubo zabo zokhetho.
Nazi ezinye iziphakamiso kunye nemisebenzi emfutshane enokuyisebenzisa eklasini ukugxila kunyulo. Ndibabeke umyalelo apho ndingabonisa khona ukuqeqeshwa eklasini ukwenzela ukwakha isigama. Nangona kunjalo, umsebenzo ngamnye unokwenziwa ngokuqinisekileyo njengomsebenzi wokuzimela.
Ukudibanisa isigama esisisiseko malunga nokukhethwa kwintetho.
hlasela i ntengiso
uvoti o bhaliswe
ukhethe ngubani oza kuba ngumongameli olandelayo
urhulumente ongavumi ukuba yiRiphabliki okanye iDemokhrasi kodwa 'uphendulela' ngaphakathi naphakathi kwamaqela
ibinzana elifutshane elisetyenziselwa ukukhuthaza abavoti ukuxhasa umviwa
iqela lezopolitiko elingaba yiRiphablikhi okanye iDemokhrasi
umntu oqhuba umongameli
umntu otyunjwe yiqela ukuba asebenzele umongameli
unyulo lokuthatha isigqibo sokuba ngubani oza kunyulwa yiqela
ummeli ovela kwilizwe onokuvota kwindibano ephambili
ukuhlanganiswa kweqela lezopolitiko ukukhetha umviwa kunye nokuvota kwezinye izinto ezibalulekileyo kwiqela
intetho eqhelekileyo esetyenziswa ngokuphindaphindiweyo ngeli phulo
ukukhangisa okuyinto enobudlova kwaye uzama ukulimaza omnye umviwa
ibinzana elifutshane elibonisa uluvo okanye inyaniso kwaye liphindaphindwa kuwo wonke amaphephandaba
bangaphi abantu abavota ukhetho, ngokuqhelekileyo kuboniswe ngepesenteji
iqela labameli belizwe abafaka ivoti yokhetho
uvotelwe ngumntu kwiKholeji yoNyulo kwivoti
inani labantu abavotela umongameli
Nayi eminye imibuzo ukufumana incoko. Le mibuzo isebenzise isigama kumdlalo ukulungiselela ukuqala ukusebenzisa iilwimi ngokutsha.
Ngawaphi amaqela abaviwa?
Ngaba ubonile ingxoxo yomongameli?
Unyulo lukaMongameli luhluke njani ukhetho lwaseMelika kwilizwe lakho?
Ngaba ngabavoti kufuneka babhalise kwilizwe lakho?
Yintoni ukuvota ukuvota njengaleli lizwe lakho?
Ngaba uyayiqonda umahluko phakathi kweKholeji yoNyulo kunye nevoti ethandwa?
Ucinga ukuba ziphi "iplank" eziphambili kwiqela leqela ngalinye?
Nguwuphi umviwa ocela kuwe? Ngoba?
Ngaloo mini kunye nobudala belizwi lomsindo , lingaba luncedo olukhuseleyo ukukhumbuza abafundi ukuba ukufihla imithombo yeendaba kumalunga nokuba neyona ndawo-mbono ngaphandle kweemangalo zengqondo.
Buza abafundi ukuba bazame ukufumana imizekelo yamanqaku acacileyo ukusuka kokubini kwesobunxele kunye nokunene, kunye nakwindawo yokujonga.
Ngaba abafundi bafumana umzekelo weRiphablikhi neRiphablikhi ingxelo yeendaba okanye inqaku.
Buza abafundi ukuba bagxininise imibono ejongene neengcamango.
Umfundi ngamnye kufuneka achaze indlela uluvo oluthe tye ngayo. Imibuzo engenakukunceda ibandakanye: Ngaba iposi leposi ibonisa indawo ethile yokujonga? Ingaba umbhali unqwenela iimvakalelo okanye uthembele kwiimanani? Umlobi uzama njani ukukhohlisa umfundi weengcamango zakhe? Njalo.
Buza abafundi ukuba babhale isithuba seblogi esifutshane okanye umhlathi obonisa ukuba ngumviwa ovela kwinqanaba lokujonga. Ba khuthaze ukuba bagxilise!
Njengeklasini, xubusha ngeentlobo zemiqondiso abayifunayo xa befuna ukunyaniseka.
Kwiiklasi eziphambili, cela abafundi ukuba baphikisane nemiba evezwa njengemixholo yonyulo.
Abafundi bafanele bazise iingxoxo zabo ngendlela abacinga ukuba ngamnye umviwa uza kulungisa imiba.
Umsebenzi wokuPhucula abafundi
Umsebenzo olula: cela abafundi ukuba bavote umviwa okanye babale iivoti. Iziphumo zinokumangalisa wonke umntu!
Ekugqibeleni, abafundi banokufumana le ncoko yongqongqongqongqongqongqongquthela incedo, kunye nokufunda ngokubanzi ukuvavanya kokhetho lonyulo lukazwelonke .
Uhambo olufutshane lwee-ESL Izifundo
Iinjongo zeJob ze-ESL Ootitshala eMelika
Isiqalo esisiqalo sesingqinisiso sesiNgesi
I-Hallstatt yeNkcubeko - IYurophu yaseNtsundu yaseYurophu
Isingeniso ku-Yoshino Cherry
I-Top 10 Demi Lovato Iingoma
Ngaba uMlingo Unamandla Ukuba umntu Akakholelwa?
Kufuneka-Yazi Isigama sokutya kweFrench Restaurant